अप्रेशन बतास: नारायणहिटी संग्राहलयदेखि मानहुँकोटसम्म !
२०७८ पौष २४ शनिबार
नारायणहिटी संग्राहलय परिसरमा रेस्टुरेन्ट प्रकरण बाहिर आएपछि बतास समुह संलग्न रहेका एक पछि अर्को योजनाको खुलासा भैरहेको छ । कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर बतास समुहले अहिलेसम्म नारायणहिटी संग्रहालय परिसर, पशुपतिको मैत्री धर्मशाला देखि तनहुँको मानहुँकोटसम्म आफ्नो कब्जामा लिएको खुलासा भएको छ ।
नारायणहिटी संग्राहलय जस्तो ऐतिहासिक महत्व बोकेको ठाउमा निजी समुहलाई रेस्टुरेन्ट खोल्न दिने सरकारी अनुमतिले पनि यस समुहको राजनीतिक र कमर्चारीतन्त्रमा रहेको पहुँच बारे स्पष्ट हुन्छ । तर अहिले समाजिक सञ्जाल, मिडियाका कारण सरकारलाई बतास समुहका यी सबै बाहिर आएका संलग्नतामा कारवाही अगाडी बढाउने दबाब पनि बढेको छ । यसै क्रममा नारायणहिटी संग्रहालय परिसरमा बनेको रेष्टुरेन्टको संरचना शुक्रबारबाट भत्काउन शुरु गरिएको छ । यस बाहेक सरकारले विभिन्न छानबिन समिति समेत बनाएर अनुसन्धान अगाडी बढाएको छ ।
नारायणहिटी संग्राहलय परिसरमा बनाउँदै गरेका संरचना भत्काउन सुरु
नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेष्टुरेन्टका लागि निर्माण गरिन लागेका संरचना भत्काउन सुरु गरिएको छ ।
रेष्टुरेन्टका लागि बतास समूहले बनाउँदै गरेको संरचना भत्काउन सुरु गरिएको नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय विकास समिति कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार आजदेखि अधिकांश संरचना भत्काइएको छ भने केही भत्काउने तयारीमा रहेका छन् ।
समितिले आज शुक्रबारदेखि आफ्नो काम सुरु गरेको उक्त समितिका सदस्य तथा कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव टेकनारायण पौडेलले जानकारी दिए ।
नेपाल भारत पशुपति मैत्री धर्मशाला सम्बन्धमा छानबिनका लागि उक्त समिति गठन गरिएको हो । पाँच सदस्यीय उक्त समितिका सदस्यमा परिषद सदस्य आशा पाण्डे, विश्वकरण जयन तथा देवीप्रसाद बराल रहेका छन भने मन्त्रालयका लेखा उपसचिव सदस्यसचिव रहेका छन् ।
उक्त समितिलार्ई सात दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । पशुपति मैत्री धर्मशालालार्ई होटेलका रूपमा सञ्चालन गरिएको भन्ने आरोप लागेपछि त्यसको सत्य तथ्य छानबिनका लागि उक्त समिति गठन गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिएका छन ।
उक्त धर्मशालालार्ई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले होटेल आनन्द प्रालि (बतास समूह) लार्ई भाडामा दिएको थियो । उक्त समूहले पशुपति मैत्री धर्मशालालाई होटलका रूपमा सञ्चालन गरेको तथा तीर्थालु एवं धार्मिक पर्यटकसँग मनपरी भाडा लिने गरेको आरोप लागेको छ ।
मानहुँकोटमा पनि बतास समूहको नजर
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड दमौलीको जग्गा पनि भाडामा :
३० असार २०७४ मा सम्झौता गरेर पाँच बर्षका लागि जग्गा भाडामा लिएको बतासले गत आर्थिक बर्षको भाडा २६ लाख ६० हजार ६३९ रुपैयाँ बुझाएको छैन । दमौलीको जग्गा भाडा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड पोखराले बुझ्ने गर्दछ ।
आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ असार मसान्तसम्म दमौलीको जग्गा भाडा मात्र बतासले २७ लाख ३५ हजार ३३९ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । समयममै भाडा नबुझाएपछि दुई लाख २५ हजार ३०० रुपैयाँ विलम्ब शुल्क लागेको छ ।
आरजुको नाम किन आयो ?
बतास समुहको सल्लहाकार रहेको भन्ने खबर बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी डा. आरजु राणा देउवाले विज्ञप्ति नै निकालेर आफु यस समुहमा सम्बन्धित नरहेको स्पष्ट गरेकी छन् । तर उनी केहि दिन अघिसम्म बतास समुहको सल्लाहकार रहेको खुलासा भएको छ । विवादमा आउने देखे पछि उनको नाम बतास समुहको वेभसाइटबाट केहि दिन अघिमात्र सल्लाहकारबाट हटाइएको पाइएको छ ।
यसबाट पनि बतास समुहको राजनीतिक पहुँच र त्यसबाट यस समुहले उठाइरहेको अनुचित फाइदा कति छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । अहिले अगाडी आएका विषय भन्दा धेरै ठाउमा यस समुहको संलग्नता रहेको हुनसक्ने अनुमान अहिले गरिएको छ ।
काठमाडौँ । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । उनले आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा राजीनामा